အနတ္တ ရှင်းပုံ	Posted on January 1, 2010	by mettayate အနတ္တအနက် ၆ မျိုး
“အတ္တ” ကို မြန်မာလိုအဓိပ္ပါယ်ပြန်ရင် “ကိုယ်” လို့ ဖြစ်ပါတယ်။ “ကိုယ်” ကို ထပ်ပြီးအဓိပ္ပါယ်ဖွင့်လိုက်တဲ့အခါ “အနှစ်သာရ” လို့ ဖြစ်လာပါတယ်။
“ကိုယ်” ဆိုတဲ့ စကားလုံးကို သက်ရှိ သက်မဲ့နှစ်မျိုးလုံးမှာ သုံးပါတယ်။ သက်ရှိမှာဆိုရင် အကြီးဆုံး အခိုင်မာဆုံးဖြစ်တဲ့ ရင်ဘတ်နဲ့ ကျောတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်လို့ ခေါ်ကြပါတယ်။ သက်မဲ့မှာတော့ ကိုယ်ထည်လို့ သုံးပါတယ်။ ဥပမာ ကွမ်းအစ် ဆိုရင် ကွမ်းထည့်တဲ့ အောက်ခံခွက်ကြီးတစ်ခုလုံးကို ကိုယ်ထည်လို့ ခေါ်ပါတယ်။ အကြီးဆုံး အခိုင်ခံ့ဆုံး ဖြစ်လို့ပါပဲ။ ကလေးတွေ ကစားတဲ့ အိုးပုတ်လေးကို မိုးထဲလေထဲပစ်ထားရင်တောင် လေးငါးလတော့ မပျက်မစီး ခိုင်မြဲနေပါသေးတယ်။ ဘာဖြစ်လို့ခိုင်မြဲရသလဲဆိုတော့ “အတ္တလို့ခေါ်တဲ့ ကိုယ်” ရှိနေလို့ပါပဲ။
ပရမတ်ခန္ဓာငါးပါးရဲ့ ခိုင်မြဲတဲ့အနှစ်သာရ မရှိပုံ ကို ဗုဒ္ဓက ဘာကြောင့် “အနတ္တ၊ ကိုယ် မရှိဘူး။ အတ္တ မရှိဘူး။ ခိုင်မြဲမှု မရှိဘူး” လို့ ဟောခဲ့ရသလဲဆိုတော့ – ပထမအချက် အနေဖြင့် – ပရမတ်ခန္ဓာငါးပါးဟာ မူရင်းကိုက အကောင်အထည်၊ အရည်၊ အဖတ်၊ အမှုံ၊ အမွှား၊ ဘာမှရှိတာ မဟုတ်ဘူး။ သဘောတရားအနေနဲ့သာ ရှိတာ။ (ပထ၀ီဓါတ် ရှင်းပြပုံကို ပြန်ကြည့်ပါ။)
This entry was posted in ထေရ၀ါဒ ဗုဒ္ဓဘာသာ and tagged ထေရ၀ါဒ. Bookmark the permalink.	← ဒုက္ခ